लघुकथा : शिक्षासेवि हरिसर
“अव तपाईहरूले आफ्ना छोरा छोरीलाई राम्रो शिक्षादिन शहरका महंगा वोर्डिंग स्कुलमा लगिरहनु पर्दैन । मैले अव आफ्नो बाँकि जीवनलाई समाज सेवामा समर्पितगर्ने दृढ संकल्प लिएर शहरकोभन्दा स्तरिय पाठ्यक्रम राखेर संम्वन्धित विषयमा नै ख्यातिप्राप्त गरेका पुराना अनुभवि शिक्षकहरूको व्यवस्था गरेर एउटा नमुना वोर्डिंग स्कुल खोल्ने निर्णय लिएको छु । तपाईहरू निर्धक्क भएर आफ्ना नानीहरूको भविष्य उज्ज्वल बनाउने अवशर मलाई दिनुहोस् । “
हरिसरको यस्तो कुरा सुनेर गाउँका धेरै अभिभावकले आफ्ना नानीहरू भकाभकी हरिसरको स्कुलमा भर्नागर्न थाले । रामकृष्णले पनि शहरका स्कुलमा पढ्दैगरेका आफ्ना नानीहरूसमेत निकालेर हरिसरको स्कुलमा नाम लेखाएपछि त झन हरिसरको स्कुलको महिमाले चर्चाको सिखर चुम्यो ।
काम विषेशले रामकृष्ण शहर गएका थिए । पर सडकमा हरिसर आफ्नी श्रीमतीका साथमा दुईवटा नानीहरूसमेत लिएर हिड्दै गरेको देखियो । रामकृष्णलाई शहरमा आफ्नो गाँउको हरिसरलाई देख्दा हराएको वालकले बाबु भेटेजस्तै भयो । उनी दौड्दै हरिसरको नजिकमा पुगेर नमस्ते गर्दै भन्छन “ओ हो ! हरिसर हजुरहरू सपरिवार के कामले शहर आउनुभाथ्यो कुन्नि ?
“ए राम दाजु मेरा यी नानीहरू यही शहरमा उ त्यो पर देखिदैछ नि ? ठुलठुला विल्डिंगहरु ! हो त्यै स्कुलमा होष्टल बसेर पढ्छन् ,यो हाम्रो देशकै सबैभन्दा राम्रो पढाई हुने स्कुल हो । आजबाट ठण्डा छुट्टी भयो अनि छोराछोरी लिएर गाँउ फर्किदैछु“ हरिसरले निर्लज्ज यसो भनेको सुनेर रामकृष्ण ट्वाँ परेर के के सोचिरहेका थिए ।